ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်.... - Myanmar in Singapore
ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်....
Posted by khaing po po win on April 29, 2011 at 9:35am
ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်မသိချင်ကြဘူးလားဟ င် နည်းကတော့လွယ်လွယ်လေးပါ...သင်
ရယ် သင့်ရဲ့ချစ်သူေ မွးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးကိုပေါင်ြး ကည့် နောက်ဆုံးရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့... ကဲ အစမ်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင် သင်က 13.1.1991 သင့်ချစ်သူက 4.4.1990 ဆိုပါစို့ 13+1+1991+4+4+1990=4181 4+1+8+1=14 > 1+4=5 အဖြေက5ပေါ့ ရှင်းပြီနော်... ကဲ တွက်ကြည့်ကြနော်.. သူငယ်ချင်းတို့လဲစမ်းကြည့်လိုက် ကြနော်............ (1 )ရတဲ့သူကတော့ သင်ဟာသူ့ကိုအသက်ပေးနိုင်လောက်အောင်ကိုချစ်ပေမယ့် သူ့အတွက်ကတော့ ရည်းစားဟောင်းကပစ်သွားလို့ အသဲကွဲပြီး ခဏတာလာနားတဲ့ bus ကားမှတ်တိုင်လို ဖြစ်နေတာပါ သင်နဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာပျော်ရွှင်နေရပေမယ့် အဲဒီပျော်ရွှင်ခြင်းက ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဖြစ်နေတတ်တ ယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပွေရှုပ်တတ်တဲ့သူ့အကျင့်က သင့်ထက်သာမယ့်သူကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေလို့ပဲဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာ မျောက်တစ်ကောင်သစ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာနဲ့အတူတူလိုဖြစ်နေတာပါ ... နောင် bus ကားအသစ်ဟာ သူ့ဆီဆိုက်ကပ်လာခဲ့ရင် သူတစ်ခါတည်းပြေးတက်သွားဖို့ဝန်ေ လးမှာမဟုတ်သလို သင့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့မှာလဲဆိုပြီး ခေါင်းပြန်စောင်းငဲ့ဖို့တောင်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ... (2) ရတဲ့သူကတော့ သင်နဲ့သူဟာချစ်တော့ချစ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် မုန်းတီးမှုနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ် တူတူနေခဲ့ရင်လည်း လက်ဝှေ့ပွဲကိုကြည့်နေရသလို နေ့စဉ်ထသတ်မှာအမှန်ပါပဲ အကျင့်တွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး တစ်ယောက်ပြင်းလာရင် ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကလည်း အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ဒါတောင်မှသင်တို့မှာ သုံးပွင့်ဆိုင်မရှိသေးဘူးနော်.. .တစ်နေ့ကျရင် သူက ခဏဝေးဝေးလောက်နေကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောလာခဲ့ရင် သင်သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ သူကသင့်ကိုမချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်နိုင် တဲ့အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ ထားပေးလိုက်ကြပေါ့နော့....3ရတဲ့သူက Yahoo! နောက်ဆုံးတော့လည်းသင်က အစစ်အမှန်ကိုတွေ့တာပဲလေ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ရေစက်လို့ခေါ်လို့ရတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တူညီနေတာပဲ အကျင့် အကြိုက် ညစ်ပတ်ခြင်း ပေါခြင်း အရူးထခြင်း တွေပေါ့ ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ကြည့်နေရသလို ပဲ သင်တို့အချစ်ဟာဘာအရသာမှမရှိပေမယ့် ခိုင်မြဲမှုရှိတာတော့အမှန်ပဲလေ ကြည့်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထိမြင် ရတယ်ဆိုတာပေါ့ အဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ် သင်သတိထားရမှာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပဲ သင့်အတွက်သူဟာ ငြီးငွေ့စရာကောင်းနေတယ် ဒါကြောင့်သင်ဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အချစ်တွေကိုရှာဖွေနေတယ် နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်လူမှ သင့်ရဲ့အခုအရသာမရှိတဲ့ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လူထက်ပိုပြီး ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိလိမ့်မယ် ...မသိနိုင်ဘူးလေ အဲဒီအချိန်ရောက်ခဲ့ရင် ...နှောင်းချင်လည်းနှောင်းသွားမှာပေါ့ :P4ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ စေးကပ်ကပ်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုခွာခွာ ခွာလို့မရတဲ့ပုံစံ ဘ၀ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမှန်းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနေတယ် သူလည်းသင့်အကျင့်တွေဟာသူနဲ့ပေါင်းစပ်လို့ရမလားဆိုတာကိုမသေချာသေးဘူးဖြစ်နေတယ် သင်ကလည်း အိနြေ္ဒရှင်ပီသစွာနဲ့ သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောဖို့ မရဲဘူးဖြစ်နေတယ် ဒါကြောင့်ဟိုဖက်ကိုလည်းမသွား ဒီဖက်ကိုလည်းမရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ အကောင်းဆုံးကတော့သင်တို့နှစ်ယော က် ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ပြသနာကိုတူတူဖြေရှင်းကြတာကအကောင်းဆုံးပဲလေ မဟုတ်ရင်တော့ သင်တို့ထဲက တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ဟာအသစ်တွေ့ ပြီး သင်တို့ရဲ့ဇါတ်လမ်းလေးက ဇါတ်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်နော် ...5ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်က သွေးရဲရဲသံရဲရဲအချစ်ပေါ့ ဘာဂိုဏ်း ညာဂိုဏ်းတွေ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေလိုက်ရင်းအသက်လုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချစ်စစ် သင်တို့အချစ်လမ်းကြောင်းမှာဘယ်ေ လာက်ပဲအန္တရာယ်ရှိပေမယ့် သင်တို့ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုနားလည်ပြီး နှလုံးသားအစစ်အမှန်နဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ် သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ခုချိန်မှာချစ်သူအဆင့်တွေမဟုတ်ေ တာ့ပါဘူး နှစ်လွာပေါင်းမှတစ်ရွက်ဆို ပြီး ဖြစ်နေကြပါပြီ အသက်ပေးပြီးချစ်ကြတဲ့သူတွေအဆင့် ရောက်နေကြပါပြီ သင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်မဟုတ် ဘူးလို့ မယုံမသကာင်္မဖြစ်ပါနဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကြည်နေပါပြီ သင်ဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှင်အစစ်လို့ ...6ရတဲ့သူက ခုချိန်တွေမှာ ဘာစားစား သကြားထည့်ဖို့တောင်မလိုတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တို့အချစ်ရဲ့ချိုမြိန်ြ ခင်းက သကြားရဲ့အချိုဓါတ်ကိုတောင်ဝါးမြိုသွားလို့ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပျော်ရွင်မှုဟာ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့သင်ခံစားရမယ်ရေမြောင်းပုပ်မှာ လရိပ်ကို မြင်ရသလိုပေါ့... သင်ဟာ သင့်ချစ်သူနဲ့ ဒီလိုအမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ် လောက်ကြာကြာခံစားရဦးမှာလဲဆိုတာမ သေချာသေးဘူး သို့ပေမယ့်လည်းသင်ဟာခုချိန်မှာအ ရမ်းပျော်နေတယ်လို့တော့ ပြောနိုင်တယ်လေ အကယ်လို့သူပြသနာတစ်ခုခုရှိ ပြီး သင့်ကိုမသိစေချင်ရင်လည်း သင်က ဘာမှမသိသလိုနေမှာအသေအချာပဲ ... သင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ြ ပီလားလို့မေးရရင်တော့ သင့်ရဲ့အစွမ်းအစပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပြီးတော့ သူရဲ့ခိုင်မာမှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ေ လ သူ့ရဲ့ပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့ လားဆိုတာ....7ရတဲ့သူက ဒီတစ်ယောက်က သင့်ကိုအမြင်ရှင်းသွားအောင်လုပ် ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ် အနိမ့်စားလူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးမှု အများကြီး အများကြီးပေါ့ သင့်ကိုတစ်ခုခုကူညီလိုက်ရင်ကျေးဇူးအတင်ခံချင်တာကအရင် ပေါ့ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့ ဆိုတာသူ့ပါးစပ်ကပြောလာတဲ့စကားတွေပေါ့ ပွေလည်းပွေတယ် ကပ်စေးလည်းနှဲတယ် ဆိုးသောအရသာမျိုးစုံနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူပေါ့ သင့်နဲ့ရည်းစားလာဖြစ်တာကလည်း အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး Super Casanova ဆိုတဲ့ဂုဏ်ထူးကြီးကြောင့်ပဲဖြစ် တယ် သင်ဟာ ရုပ်မရှိရင် အဲဒီတစ်ယောက်ကသင့်ကိုမျက်စောင်း လေးတောင်ထိုးကြည့်မှာမဟုတ် ဘူး ပြီးတော့ သင်မသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတွဲပေါင်းများစွာကိုလည်း ဂိုဒေါင်ကြီးထဲထည့်ထားရတဲ့ အထိ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ခွင့်က တော့ လုံးဝမမျှော်လင့်နေပါနဲ့တော့နော်.. 8 ရတဲ့သူက သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာ 50% - 50% ပါပဲ သင်တို့အချစ်ဟာကြာပြီး အားလုံးနေရာကျနေပြီလေ တစ်ယောက်အကြောင်းကိုတစ်ယောက်သိေ နပြီလေ ဒါကြောင့်တူတူနေတဲ့အချိန်ဆို စိတ်ချမ်းသာရတယ် အဲဒီစိတ်ချမ်းသာတာက ချိုတာတွေ romantic တာတွေမရှိတဲ့ခံစားချက် သ၀န်တိုခြင်း လိုချင်တပ်မက်မှုတွေမရှိတဲ့အချစ် ဖြစ်နေပါတယ် ဒါကြောင့်သင်တို့အချစ်က သကြားပြတ်သွားတဲ့အချစ်နဲ့တူတယ်ေ လ သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိကြမှာပါ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ဘယ်လောက် နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆို တာ သူ့အပြင် သင့်အပေါ်မှာနောက်ထပ်နားလည်နိုင် မယ့်သူလည်းရှာလို့တွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ...:)9ရတဲ့သူက ... အားရိုးရိုး သင်တို့အချစ်ကို နှိုင်းရရင်တော့ နံနက်နေထွက်ချိန်နဲ့ ညနေ နေ၀င်ချိန် ... ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီး ... သူချမ်းသာနဲ့ သူဆင်းရဲ ...နတ်ပန်းနဲ့ ငရဲပန်း ... စတာတွေပေါ့ ဒါကြောင့်သင်တို့အချစ်ကို သင်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်နားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေရတယ် နောက်ထပ် ဘာထူးဆန်းစရာတွေ ထပ်လာဦးမလဲဆိုပြီးတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အကြောင်းဟာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုပဲဖြစ်နေတယ် သင်တို့နှစ်ဦးကလည်းသိနေတယ် လေ ကြာရှည်လက်တွဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့ခဏတစ်ဖြုတ်လေးလက်တွဲတာကလည်းကိုယ့်ဘ၀မှာ ရယ်စရာအမှတ်တရအဖြစ်ထားခဲ့ချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်... သင်တို့နှစ်ဦးဟာ အလွန်ခြားနားလွန်းလို့ တူတူသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ သင်တို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားခဲ့ရင် လည်း သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဆက်ဖြစ်ဦးမှာပါ... Views: 14225
Comment by Roll One on February 21, 2014 at 1:01am အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့
ဂါရ၀ ပြုပါရစေဗျာ.. Comment by manakui on July 27, 2013 at 2:05am 13+1+1991+4+4+1990=4181 4+1+8+1=14 > 1+4=5 အဖြေက5ပေါ့ ရှင်းပြီနော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲလိုရလာတာလဲမသိဘူး တို့သိချင်တယ်တတ်ချင်တယ်
တို့ဝါသနာပါလို့ပါ စိတ်လည်းဝင်စားတယ်အဲတာကြောင့်တို့ဖန်လိုကရအောင် နားလည်အောင်ဦးပမာ၃...၄ခုလောက်
တင်ပေးကြပါလားသူငယ်ချင်းတို့ရယ် တို့ဝါသနာပါလို့ပါ တင်ပေးကြပါနော် အပန်းမာကီးဘူးဆိုရင်ပေါ့
မလေးရှား Comment by nainglinn on May 28, 2012 at 10:30pm thank Comment by paingsittlin on May 27, 2012 at 6:26pm correct pa byar
Comment by KATHY TUN on May 13, 2012 at 12:50am correct
Comment by Eaint Phoo Wai on May 10, 2012 at 11:06am သူငယ်ချင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းပေးတဲ့ဟာကို share လုပ်ပေးလိုက်တာ ကျန်တာတော့ အတိဝူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ မှန်တယ်လို့ခံစား၇တယ် ဟီးးးးးတိုက်ဆိုင်၇င်မှန်တယ်လို့မှတ်ယူပြီး မတိုက်ဆိုင်ခဲ့၇င်တော့ မမှန်ဝူးလို့ပဲ ခံယူပါနော် အပျော်သဘောသက်သက်အတွက်ပဲ မှတ်ယူပေးပါနော် သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပျော်၇ွှင်ပါစေဗျာ:D Comment by kaungmyatkyaw on May 2, 2012 at 12:37am မှန်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်က ၃ ၊ ကျွန်တော်ကသာ ............. ဟီဟီး Comment by nant ladyia cho on December 26, 2011 at 11:03am ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Comment by ACRS Autoinsurance on December 21, 2011 at 3:00pm 13+1+1991+4+4+1990= 4003 =7(ဘယ်လိုတွက်လိုက်လို့ 4181 ရသွားတာလဲ)
Comment by khaingzin on December 21, 2011 at 12:31am ခိုင်ဇင်လဲ နံပါတ် (၇)ပဲ...။
သူ့ကိုယ်သူ အထင်ကြီးတယ်ဆိုတာထက်...ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ကျေးဇူးနော်... ‹ Previous